Madaxweyne Shariif ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay dalka Tanzania Dare-Salam+Swro
Loading...	Home Wararka Madaxweyne Shariif ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay dalka Tanzania Dare-Salam+Swro
Madaxweyne Shariif ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay dalka Tanzania Dare-Salam+Swro	Saturday, 16 April 2011 13:56	Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyay Caasimada dalka Tanzania ee Dare-Salam, halkaas oo Madaxweynaha uu shalay booqasho qorsheysan uu ku gaaray, kadib markii uu casuumaad sharafeed uu ka helay dhigiisa dalkaas.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Tanzaia Jakaya Mrisho Kikwete iyo xubno ka tirsan Dowladiisa, iyadoo halkaas Madaxweynaha Munaasabad soo dhoweyn ah loogu sameeyay.
Kooxda Muusigada ee Baambeyda oo ku diyaarsanaa garoonka ayaa u garaacay astaanka qaranka ee Calanka Soomaaliya, sidoo kale Cutubyo ka tirsan Ciidamada qalabka sida ee Tanzania ayaa Madaxweyne Shariif uu ka qaatay salaan sharafeed, waxaa kaloo Madaxweynaha loo riday 21-Madfac.
Garoonka diyaaradaha ee Julius Nyerere International Aiport ayaa Madaxweynaha loogu soo dhoweeyay si aan horay loo arag, halkaas oo ay ku sugayeen Madaxweynaha Tanzaniya, xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada, Xildhibaano iyo Mas'uuliyiin uu horkacayay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Tanzia C/xakiin Ugaas Cali Yaasiin.
Madaxweyne Shariif ayaa la kulmay Taliyaha Ciidamada Tanzania Gen. Davis Mwamunyange, iyagoo kulankooda diirada ku saareen arrimaha Ammaanka, iyo sidii Tanzania gacan uga geysan laheyd sidii ammaanka Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa.
Sidoo kale kulan casho ahaa oo Madaxweynaha iyo wafdigiisa loo sameeyay oo ka dhacday qasriga Madaxtooyada ayaa Labada Madaxweyne isku weydaarsadeen talooyin iyo warbixino ku saabsan xaalada labada dal, iyadoo khudbado ku tacaluqday xoojinta xiriirka labada dal ay ka kala jeediyeen.
Madaxweyne Shariif ayaa sheegay in xiririka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Tanzania uu yahay mid soo jireen ah, isagoo ka dalbaday inay gacan ka siiyaan sidii ay u taageeri lahaayeen Dowladda Soomaaliya si cagaheeda ay ugu istaagto.
Sidoo kale Madaxweynaha Tanzania ayaa isna balan qaaday inuu diyaar u yahay inuu taageero mar walba Dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inay dib u xoojin doonaan xiririkii horay ugala dhaxeeyay.
Tanzania ayaa ah Dowlad lagu ammaanay maamul wanaag iyo dimoqraadiyad, iyadoo Madaxweynayaasha soo maray ay yihiin kuwo xilalka isugu kala wareejiyay si cadaalad ah, iyadoo aanay jirin Madaxweyne midna dalka dibadiisa uga baxay ama qaarkood dambiyo lagu soo eedeeyay oo xabsi la dhigay, waa dal udub dhexaad u ah dhaqaalaha iyo siyaasada. Booqashada Madaxweyne Shariif uu ku marayay todobaadyada dalal ka tirsan Qaarada Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa noqonaya kuwo uu ku xoojinayo xiriirka dalalkaas iyo siyaasada Soomaaliya oo labaatankii sano ee u dambeeyay aheyd mid jaanta rogan aheyd marka loo eego dhanka arrimaha dibada.